2m I-Bluetooth UHF RFID Handheld Reader VH-75 - IVANCH
Isango RFID Reader
Isifundi se-Desktop RFID
I-RFID Reader ehlanganisiwe
I-Handheld RFID Reader
I-Bluetooth RFID Reader
I-Android RFID Reader
I-UHF RFID Tag
Module ye-UHF RFID
Ikhaya » Umkhiqizo » 2m I-Bluetooth UHF RFID Handheld Reader VH-75
Uhlelo lweWindows Fixed RFID Reader
4 emachwebeni UHF RFID Reader Reader VF-747
8 emachwebeni UHF RFID Reader VF-787
16 amachweba UHF RFID Reader Reader VF-P16
32 amachweba UHF RFID Reader Reader VF-P32
4 emachwebeni I-Waterproof UHF RFID Fixed Reader VF-647P
Uhlelo lwe-Android Fixed RFID Reader
I-Android UHF RFID Reader Reader VF-S108
Isistimu ye-Linux Fixed RFID Reader
I-Linux UHF RFID Reader Reader VF-987
I-EAS UHF RFID Gate Reader VC-420T
Umlobi We-Desktop Wokubhala we-USB UHF RFID VD-67
I-Ethernet UHF RFID Desktop Reader VD-68
7dBi UHF RFID Reader elihlanganisiwe i-VI-83T
9dBi UHF RFID Reader ehlanganisiwe i-VI-89
12dBi UHF RFID Reader Ehlanganisiwe i-VI-88T
2m I-Bluetooth UHF RFID Handheld Reader VH-75
6m I-Bluetooth UHF RFID i-Handheld Reader VH-88
6m I-Bluetooth UHF RFID Sled Handheld Reader VH-76
2m I-Android UHF RFID Handheld Reader VH-C77
2m Rugged Reader ye-HF ye-Android HH RFID
8m i-Android UHF RFID Handheld Reader VH-C83
8m Rugged I-Reader ye-UHF ye-Android UHH RFID
I-VS-C2515 ye-Android UHF RFID
4 Amachweba Uhf Rfid Fixed Reader Vf-747
Ububanzi bokuvama 865-868MHZ，902-928MHZ(Adjustable)
Okukhipha i-RF 18~26 dBm(adjustable)
Izakhiwo zemishini nezikagesi
Amandla Rechargeable lithium battery（3.7V,3200mAH）
Reading Indication Buzzer, ukudlidliza,LED
A:Singumkhiqizi ohola phambili we-UHF RFID Hardware waseChina onokuningi kunalokho 10 iminyaka. Sitholakala eShenzhen, idolobha eliseduze neHongKong.
Q: Yikuphi imikhiqizo oyenzayo?
A: singakwazi ukwenza zonke izinhlobo zomfundi we-UHF RFID, i-antenna nethegi (athobele umthetho olandelwayo we-EPC C1G2 ne-ISO-18000 / 6C). singakusiza wenze ngezifiso zonke izinhlobo zomfundi, i-antenna nethegi.
Q: Yini izinzuzo zakho?
A: sinezinzuzo eziningi.
Okokuqala, besilokhu sigxile ku-R&D, imikhiqizo, ukuthengisa kanye nokwenza umsebenzi we-UHF RFID umfundi, UHF RFID i-antenna ne-UHF RFID Tag ngaphezulu kwalokho 10 iminyaka.
Okwesibili, Sikwazi ukuklama zonke izinhlobo zezixazululo ze-RFID zezimboni noma izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Okwesithathu, imikhiqizo yethu ithengisiwe kuwo wonke umhlaba, basebenzela uhulumeni, umthengisi omkhulu, isikole, inkampani enkulu yokukhiqiza kanye nenkampani enamalungu okusebenza kahle kanye nokuphatha izimoto / ezokuhamba njll.
Okwesine, sinabasebenzi bethu abangochwepheshe ku-RFID, Akunandaba noma yini ukukhiqiza, ucwaningo noma unjiniyela noma ukuthengisa.
Q: Uhlobo luni lweklayenti lakho??
A: Njengomakhi wehadi we-RFID, sisebenza ngokujwayelekile nge-system integrated, umhlinzeki wezixazululo noma inkampani yesoftware ye-IT ngqo ngoba singabanikeza i-Hardware kubo futhi bangakwazi ukuthuthukisa isoftware futhi basebenzise / bafake / bahlanganise i-Hardware ne-software yabasebenzisi babo bokugcina ngqo.
Q: Uma ngifuna ukuthenga imikhiqizo yakho, yini okufanele siyenze kuqala?
A: njengoba umkhiqizo we-RFID uhlelo oluyinkimbinkimbi (dinga ukuthuthukiswa okuqhubekayo), ngakho-ke udinga ukusitshela isidingo sakho sephrojekthi, Ngokwesibonelo,
yini into elandelwayo?
Yiliphi ibanga lokufunda elidingekayo?
Uhlobo luni lomfundi ofuna ukulisebenzisa kuphrojekthi yakho?
Isifundi esigxiliwe noma umfundi ophethwe ngesandla?
Ngemuva kokuba sesicelile imininingwane yakho, sizokuthumelela i-dashasheet nekhotheshini yesethenjwa sakho.
Ngemuva kokuqinisekisa kahle, sizokuthumela i-PI yokukhokhela isikhwama kuthi-ke sizokuthumela izimpahla kwa-ASAP uma sesivele siyikhokhile imali yakho.
Q: Ingabe uyanikeza isoftware?
A: asinayo noma iyiphi isoftware yokuphatha, kodwa sine-SDK yabafundi yokubonisa kwakho ukuthuthuka okuthuthukile nge-software yakho yokuphatha yamanje.
Q: Yisiphi isikhathi sakho sokulethwa?
A: Uma sinabo esitokweni, isikhathi ukulethwa kuyinto 1-2 izinsuku.
Uma singenazo ezanele esitokweni, isikhathi sokulethwa sizoba 3-10 izinsuku, kuya ngosayizi woku-oda.
Q: Ingabe imikhiqizo yakho inakho konke okungabolile?
A: imikhiqizo yethu inezitifiketi ze-CE ne-FCC.
Q: Uyini imakethe yakho eyinhloko?
A: imakethe yethu enkulu yiNyakatho Melika kanye neNingizimu Melika, MINA, IRussia, I-Afrika ne-Asia njll.
Q: Yiziphi izimboni i-UHF RFID esetshenziswa kabanzi manje?
A: UHF RFID uthuthuka ngokushesha okukhulu, I-RFID ubuchwepheshe obuphambili. kwe-IOT, njengoba sazi ukuthi idatha enkulu yesikhathi iza kithi, UHF RFID usebenzise leli thuba ukuthuthukisa ngokushesha.
Q: yini indlela yakho yokukhokha
A: T / T , i-Western Union , I-Paypal , Isiqinisekiso sokuhweba se-Ali
Q: yini iwaranti yakho
A : wonke umkhiqizo wethu unawo 1 iwaranti yonyaka uma kungekho okubangelwa ngumuntu
Ikheli:F4, Isakhiwo B, I-Fuanna Industrial Park, Isifunda iLonghua, Shenzhen, China
Umakhala ekhukhwini:+86-755 82426775
IVANCH ©I-copyright ©2022 Wonke Amalungelo Agodliwe.